के राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने झै नेपालमा राजतन्त्र फर्किन संभव छ – EstudyPage
Ram Gautam Land and Building , News And Update , Person , June 27th, 2020
आज राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टिले एउटा १६६७ शव्दको विज्ञप्ति निकालेको छ त्यसमा देशमा भएका सम्पुर्ण गतिविधीमा असन्तुष्टि पोख्दै लिपुलेक , लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा प्रकाशन गर्नुलाई सह्रानीय का भनेको छ ।
यसमा एउटा गंभिर आंशका गरिएको छ भारतको भाजपा सरकार नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र फालेर हिन्दु राज्य र राजतन्त्र ल्याउन चाहान्छ भनिएको छ ।
यसैमा एमसिसिको घोर विारोध गरिएको छ । यो सरकार कम्युनिष्टको होइन सनातिना बुर्जुवाहरुको सरकार हो भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । जे होस विज्ञप्तिमा व्यापक अन्तर विरोध छ । जब यो सरकारको जन्म को आधार नै दिल्ली थियो जहाँ गएर १२ बुँदे संझौता गरिएको थियो ।
त्यसैको प्रतिफल स्वरुप राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फालिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा एक प्रकारले गैह्रहिन्दुहरुको सरकार थियो । सोनिया गांन्धी र मनमोहन सिंह । डा मनमोहन सिंह गौप्राणि थिए वास्तविक शत्ता त द एक्सिडेन्टल प्राइमिनिस्टर भन्ने पुस्तककमा लेखिए अनुसार सोनिया गांन्धीको हातमा थियो ।
यदि उनीहरुले राजतन्त्र फालेका हुन् भने अहिलेको हिन्दुवादी भारतीय सरकारले राजतंन्त्र पुर्नजीवित गर्न चाहानु कुनै अपराध भएन ।
तर राजतन्त्र त्यतिबेला आउने हो जतिबेला नेपालका ५० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसले राजा चाहेका हुने छन् ।
यो तत्काल हुने वाला छैन । त्यसैले भारतले चाहादैमा नोपलमा राजतन्त्र आउने वाला छैन । मुख्य कुरा त राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता असंभव छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता बचाउन का लागि अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको चाकरी आवश्यक बर्तमान सरकारलाई जुन देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा चित्रबहादुर केसिको अनुमान केवल अनुमान मात्र प्रतित हुन्छ ।
हेरौं उनको वक्तव्य ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय बुढानिलकण्ठ न. पा. १०, ज्योतिनगर, कपन, काठमाडौं Phone : 01-4164304, Email : rajamo2052@gmail.com Web : www.rajamo.orgप्रेस वक्तव्य राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको अनलाईन बैठक यही असार ११ गते बस्यो । बैठकमा देशको समसामयिक राजनीति, घटनाहरु, संगठन र आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरी निर्णयहरु भएका छन् । संगठन सम्बन्धि र आगामी कार्यक्रमको ठोस योजना केन्द्रीय कार्यालयले बनाई पछि संप्रेषण गर्नेछ । नीतिगत निर्णयहरुको जानकारी दिन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको मात्र होइन, त्यो गम्भीर राष्ट्रघाती छ । यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यसबारे नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुताबासका अधिकारी र अमेरिकाको सुरक्षा निकाय (पेन्टागन)ले स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यो रणनीतिको उद्देश्य अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिलाई सामरिक रुपले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा मद्दत पुराउनु हो । त्यसलाई संसदबाट पारित गरेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहने छैन र हामी अमेरिकी क्याम्पमा खडा हुन पुग्ने छाँ । आर्थिक दृष्टिले पनि राष्ट्रहितको पक्षमा छैन ।
याक एण्ड यति (फाइभ स्टार) होटलमा यसको कार्यालय छ । लाखाँ तलब लिने कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । अहिले नै प्रशासनिक खर्चमा करीब पौने ३ अरब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एमसिसीका विरुद्ध देशका राजनीतिक दल, संघ, संस्था स्वयं नेकपाका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र जनता सडकमा ओर्लेर विरोध गरेका छन् । त्यसको लागि हामीले सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । अझै पनि ओली नेतृत्वको सरकार र अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन त्यसलाई संसदबाट पारित गरी लागु गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले त्यसबारे गम्भीर चासो देखाएका छन् र नेपाल सरकारका विदेश मन्त्रीले आगामी संसदको अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसकारण, त्यसका विरुद्धको संघर्षलाई जारी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
२. सरकारले “नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमा बसेपछि उनलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान सहित” नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ । उक्त प्रावधानलाई हामीले सही मान्दछौँ र त्यसको समर्थन गरेका छौँ । तर, ती महिलाले माईती देशको नागरिकता त्यागिसकेपछि नै नेपाली नागरिकता दिनु सही हुन्थ्यो । माईती देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रियामा लगे मात्र हुने विद्यमान कानुनको व्यवस्था सही छैन । यसबाट दोहोरो नागरिकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । यसको साथै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था पनि सही छैन । त्यसप्रकारका व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्दछौँ । ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने उपरोक्त व्यवस्थाको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका छन् । त्यो विरोध तराईका केही जिल्लामा सीमित छ । यो सामान्य कुरा हो कि कुनै पनि देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यस देशको विशिष्ट स्थितिमा निर्भर गर्दछ । दुई विशाल जनसंख्या भएका देशहरुको बीचमा नेपाल अवस्थित छ ।
आफ्नो देशको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाएको छ । रोजगारीका लागि देशको श्रमशील शक्ति विदेशमा जान परेको छ । वर्षेनी विदेशी खासगरी भारतीय नागरिकहरु नेपाल भित्रिने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा लाखौँ भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । निर्वाचनको बेला नेपाल प्रवेश गरी मतदान समेत गर्ने गरेको कुरा सर्वविदितै छ । यसप्रकारले भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिंदा देशमा भारतीयहरु बहुमतमा हुने, नेपालीहरु अल्पमतमा हुने स्थिति बनेर नेपालमा फिजीको स्थिति हुने गम्भीर खतरा छ । लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा बनाएको र त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्न नेपालमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भयो ।
तर, अंगीकृत नागरिक सांसद सरिता गिरी त्यो अपूर्व एकताका विरुद्ध खडा भइन् । सरिता गिरी जस्ता सांसद केही संख्यामा हुने हो भने वा बहुमत भयो भने त्यो स्थितिमा नेपालको स्थिति फिजी जस्तै हुनेछ । त्यसकारण, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति कडा हुनुपर्दछ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको नीति र तिनीहरुका गतिविधिको राजनैतिक भण्डाफोर गरिनु पर्दछ ।३. हामीले सुरुदेखि नै संघीय प्रणाली नेपालको लागि सही नभएकाले त्यसको विरोध गर्दै आएका छौँ । अब संघीयता व्यवहार मै अनावश्यक र असफल सिद्ध भइसकेको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गरेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक ठूलो खर्चका कारणले विकास निर्माणको खर्चमा व्यापक कटौति गर्न परेको छ । संघीय प्रणालीको मुख्य अंग प्रदेशको राजनीतिक संरचना हो । व्यवहारमा यसको औचित्य पुष्टि हुने कुनै काम भएको छैन । कोरोना महामारीको बेलामा पनि त्यसले आवश्यक कार्य गर्न परेको छैन ।
केन्द्र र स्थानीय तहले नै कार्य गरेका छन् । बीचको यो तहले कार्यप्रक्रिया बढाएको छ । अहिले संकटको बेलामा पनि प्रदेशले आफ्ना लागि सेवा सुविधा बढाएको छ । यहाँ बढी अनियमितता पनि हुने गरेको छ । संघीयता पक्षधर दल, समुह तथा समुदाय समेतले पनि यसको विरोध गर्न थालेका छन् । यसलाई खारेज गर्नु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । संघीयतालाई खारेज गरी यसमा खर्च हुने ठूलो रकम कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार तथा कोरोना पीडितलाई सहयोग गर्न पर्छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फिर्ता हुने श्रमशील नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ ।४. देशमा कोरोना तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । विदेशबाट आएकाहरुलाई सिधै गाउँ बस्तीसम्म पठाउँदा स्थिति अरु गम्भीर बन्ने छ । कतिपय विरामीहरुलाई पीसिआर परिक्षण नगरीकन घर फिर्ता गरिएको छ ।
क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन । औषधि, उपकरण तथा उपचारको प्रयाप्त व्यवस्था छैन । सामाजिक दूरी पालना गर्ने कुरामा उपेक्षा हुँदै गएको छ । कोरोना रोकथाम, उपचार तथा सहयोगको रकममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु आएका छन् । यस्तो मानवीय संकटको बेला सरकारका यी गतिविधि अत्यन्त निन्दनीय छन् । देश विदेशबाट कोरोनाको रोकथामका लागि प्राप्त सहयोग, संघीयतामा हुने अनावश्यक खर्चको रकम, सांसद मार्फत खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट रकम समेत कोरोना रोकथामका लागि खर्च गर्न हामीले जोड दिन्छौँ । स्थानीय तहलाई विकास निर्माण तथा प्रशासनिक खर्चलाई छुट्याएको रकमबाट कोरोनाको लागि खर्च गर्न हुँदैन । त्यहाँको सबै खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्न पर्दछ । राज्यका सबै निकाय र श्रोत कोरोना जस्तो महामारीको रोकथाम, उपचार, पीडितलाई सहायता, विपन्न वर्गलाई जीविका तथा नयाँ रोजगारी सृजना गर्न सदुपयोग गर्न हामीले जोड दिन्छौँ ।
९. अहिले कोरोनाले सृजना गरेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । स्कूल, कलेजमा शिक्षण बन्द भएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनलाईन शिक्षण गर्न थालेका छन् । अब सबैतिर अनलाइन शिक्षण गर्ने कि नगर्ने ? विद्यार्थीले नपढेको महिनाको शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने ? प्राइभेट शैक्षिक संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाउने कि नपाउने ? आदि विषयमा विवाद भइरहेको छ । अहिले कोरोनाको कारणले शैक्षिक संस्थामा प्रत्यक्ष शिक्षण गर्न संभव छैन । अब विज्ञान र प्रविधिको विकासको कारणले अनलाइन शिक्षण गर्नु राम्रो हो । तर यो सुविधा विपन्न वर्ग र क्षेत्रमा विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सामान्यतः नपढेको महिनाको विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु मनासिव हुँदैन । शिक्षक, कर्मचारीले काम गर्ने स्थिति नभए पनि उनीहरु बाँच्नु पर्छ । यसको लागि आजीविका चाहिन्छ । उपरोक्त समस्याहरुको सम्बन्धित पक्ष, त्यस क्षेत्रका विज्ञ र सरकारका बीच छलफल गरेर न्यायोचित प्रकारले समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।मिति २०७७ असार १३
एमसिसिमा सरकार अर्को चाल चल्दै
यो मितिबाट शेयर बजार खुलाउने तयारीमा धितो पत्र बोर्ड
किर्तेमा शाखा प्रमुख समातिए सवै कर्मचारी अनुसन्धानमा लहरो माथिसम्म
पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाकार्कीको हत्या प्रकरणमायस्तो आयो अन्तिम निष्कर्ष
सबैको घरमा ल्यापटप नभएकोले गाउँभरका विद्यार्थीलाई माइकमा पढाउन थालियो